Xaafadda Rinkeby oo nin lagu toogtay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nin xalay fiid-nimadii lagu toogtay maqaaxi ku taala Rinkeby oo u geeriyooday dhaawicii ka soo gaaray. sawir: Fredrik Sandberg/TT
Xaafadda Rinkeby oo nin lagu toogtay
La cusbooneeyay tisdag 9 januari kl 10.01
La daabacay tisdag 9 januari kl 08.42
Nin ayaa fiid-nimadii xalay u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray toogasho madaxa lagala beegsaday oo ka dhacday xaafadda Rinkeby oo dhacda galbeedka magaalada Stockholm.
-Qaraabadii ninkaasi ayaa lagu war-geliyey inuu wiilkoodii geeriyooday, hase yeeshee uu ciidanka ammaanka ka gaabsaday inuu faallo intaa ka badan ka bixiyo, sida ay sheegtay Eva Nilsson oo u warrameeysay hayadda wararka Sweden ee TT.
- Baaristu waxay noogu socotaa si xawli ah, sida uu laanta idaacadda ee P4 Stockholm u sheegay Tove Hägg oo u hadlayay ciidanka ammaanka.
- Tove Hägg ayaa sheegay in aaney illaa hadda jirin cid loo qabtay fal-dembiyeedkan, hase yeeshee waannu arki doonaa waxa dhaca wakhtiyada soo socda, sida uu sheegay.
Alaarmiga ayaa soo gaaray hayadaha ku shaqada leh saacaddu kolkay ahayd 18:30 fiid-nimadii isniintii shalay kadib markhaatiyo goobta ku sugnaa ey maqleen dhawaaqyo ey u fahmeen rasaas oo ka dhacey agagaarka godka xaddiidka tareenka ee xaafadda Rinkeby.
Illaa iyo hadda ma jirto cid falkaasi loo qabtay, hase yeeshee dhowr shakhsi ayaa wareeysiyo loogu yeerey. Sidoo kale waxaa goobta ka bilowday baaris dembi dil ah ee dhanka teknikada. Halka uu maamulka degmaduna ka furay goob dadka baahida u qaba lagu caawiyo.
-Dareen adag ayaa xaafadda ka jira, bulshaduna waxaa haya argagax, sida uu sheegay Per Granhällen, ahna madaxa laanta istraateejiyada ee ammaanka xaafadaha Rinkeby-Kista.